Ny boatin-tsakafo plastika fanao japoney dia maka vata-pisakafoanana
Fanary, Maitso ary azo antoka; Miaraka amin'ny akora farany kalitao avo lenta, fanontana avo lenta ary teknika fandrakofana, ny vokatray dia manisy pirinty mamirapiratra sy miloko izay manampy amin'ny fanasongadinana ny fihavanan'ny sakafo.
Andian-tsarety, fork ary sotro
1. Fiantohana avo lenta, fanaterana haingana ary serivisy mafana.
2. Fitaovana ara-tontolo iainana sy famokarana mahazatra, fiarovana ho an'ny rehetra.
3. Volavola vaovao namboarina sy malaza indrindra.
Vovo-dronono misotro hosotroin'ny isam-batan'olona tsy voavaha, Ahitra Plastika mainty BPA maimaim-poana 7.85 Inch.
Fantsona miendrika mahitsizoro: 270 * 190 * 75 mm, fahafaha-manao 2000g, fonosana 100 pcs / polybag, 400pcs / baoritra.
Ao amin'ny fiarahamonina ankehitriny, ny fonosana vokatra dia tena zava-dehibe amin'ny vokatra, ny fonosana tsara dia mety mitana andraikitra lehibe amin'ny varotra vokatra. Amin'ny maha vokatra vokatra fonosana blister anao amin'ny fisafidianana fitaovana sy toetran'ny fitaovana, ataovy tsara tarehy sy soatoavina ny sakafo.
Fitaovana boribory vita amin'ny varotra vita amin'ny takelaka vita amin'ny takelaka boribory
Ny takelaka plastika dia azo esorina sy lovia maivana ary malefaka vita amin'ny akora matanjaka sakafo avo lenta, ampiasaina matetika ho takelaka plastika fety, lovia fampakaram-bady, ary sakafo hariva ary fitsingerenan'ny andro hafa.